Beesha Caalamka oo ku qasabtay Farmaajo iyo Khayre inay tagaan Dhuusamareeb – news
Beesha Caalamka oo ku qasabtay Farmaajo iyo Khayre inay tagaan Dhuusamareeb
Xiriirka madaxda Dowladda Dhexe iyo Maamul Goboleedyada ayaanan cago badan ku taagneyn tan iyo markii la doortay madaxweyne Farmaajo 2017 oo waqtigiisa hadda sii dhamaanayo.
Muqdisho, Soomaaliya – Madaxda ugu sarreysa dowladda Soomaaliya ayaa la filayaa inay saacadaha soo socdo gaaraan magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug, halkaas oo ay ku suganyihiin madaxda shanta maamul goboleed ee dalka.
Wararka ayaa sheegaya in Madaxweynaha, Ra’iisul wasaaraha iyo guddoonka labada Aqal ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ay ka qeybgali doonaan wajiga labaad ee shirka kadib markii Madaxda Maamullada ay ugu baaqeen inay Dhuusamareeb yimaadaan.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Cali Khayre iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta oo Isniin ah la filayaa inuu gaaro Dhuusamreeb, sida Keydmedia Online u xaqiijiyeen saraakiil katirsan maamulka Galmudug oo arintaan si dhow ula socdo.
Ilo wareedyo ayaa sidoo kale sheegaya in Madaxweyne Farmaajo iyo wafdigiisa ay maalinta ku xigto bixi doonaan, waxaana si hordhac ah maanta u gaaraya magaalada, ilaalada gaarka ah ee madaxweynaha iyo Kooxda Baratakoolkiisa.
Beesha Caalamka ayaa la sheegayaa in ay arintaan gadaal ka riixeyso, islamarkaana dooneyso in is-faham waaga siyaasadeed ee u dhaxeeya dowladda iyo Dowlad Goboleedyada halkaas lagu soo afjaro, waxaana socdo dadaaladii ugu dambeeyay.
Wasiirka Amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi oo xalay la hadlayay mid ka mid ah Telefishinada maxaliga ah ee Muqdisho, ayaa xaqjiijiyay safarka madaxda ugu sarreyso ee DF ay ku tagayaan magaalada Dhuusamareeb.
Arintan ayaa ka dambeysay markii War-murtiyeedkii ay xalay soo saareen madaxda Dowlad Goboleedyada loogu baaqay Madaxweynaha iyo Ra’iisal Wasaaraha inay shir wada-tashi ah oo ka dhacaya Dhuusamareeb ay kasoo qeyb-galaan si ay uga wada arrinsadaan tubta farsamo ee qabsoomidda doorashada 2020/2021.
Madaxda Maamullada ayaa ku raacay Xaliima Yareey warbixinteedii ahayd in dalka aan ka dhici karin doorasho qof iyo cod ah, sababo amini, diyaar-garow la'aan, khilaafka siyaasadeed ee jira iyo dhaqaalihii loo baahnaa in lagu qabto doorashadda oo aan la haynin.